トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ukuphonononga kwi lula umzekelo imeko kububeka zegumbi pa kwemikhosi
Xa nesendlu pa, iyavela imveliso ngendlela efanayo namanye amashishini, oko kukuthi, kukho umfuziselo esicetyiswayo. Indlela iza kwenza izindululo imodeli eyahlukileyo nganye zegumbi elo liphezulu pa, apho yintoni ikhompyutha imifuziselo, siza kujonga indlela ukuhlola ukuba ingaba imodeli obacetyiswayo evenkileni.
Indlela ukuchonga ezona kwimodeli elicetyiswayo yi ilula kakhulu. Oku, kubonakala ngathi yindlela benu enibenzileyo eqhelekileyo na, nesendlu pa. Kuqala kwinto zonke, ukususela ekungeneni ngaphambili pa parlour, jonga kwi umfuziselo esifakwe kwindawo apho ekulula ukuyibona kakhulu. Ukuba imifanekiso ngaphandle Xintai inani le modeli mkhulu, loo nto imodeli nebhodi ngaphandle Umfuziselo engalunganga.
Ukongeza, i Xintai replacement elikhulu, njalo njalo, kwimeko lokufakela inani elikhulu inani, ungafuna ukufaka oomatshini abatsha kule ndawo. port Front, apho umthengi uza kutyelela kwi engundoqo. Kuba loo njongo, imifuziselo ukuba ndibeke awona ngoku pa parlour, ibekwe kwindawo esekuhleni iye yaba zizinto eziqhelekileyo.
kwamanye amashishini, kucetyiswa imveliso uya kuboniswa woziswa emnyango, kuya kuba ukuba benza ezi meko efanayo na. Kwakhona kufutshane emnyango iiphowusta kunye POP masijonge. Le modeli ikufutshane
phambi lokuvula, POP, njl aqhubela kufuneka kubekho phantse ngaphandle kokukhetha. It efakwe kuloo ndawo sisesona imifuziselo ibhilibhodi kunye neendlela ezintsha, ukuze abe ngumbono omhle ukuba sikhumbule kuba ke mthetho wegolide. Kulo mzekelo, ogxininisa imodeli non-ibhilibhodi kunye Xintai kukuthi, ethetha ukuba ibekwe kuyo nayiphi na indawo, nokuba wena zifakelwe-ngaphandle ngasemnyango ngasemva, sisoloko zifakwa emva kwekhosi.
Ethetha kutheni, kufuphi emnyango umva uye yokungena nokuphuma yabaxumi, kukuba aqhubela abantu abeza ekungeneni emnyango umva yemifanekiso sasemthethweni esinelungelo lokuwisa kucetyiswa. Le iindwendwe ukutyelela nakrakra kwangelo liso ngaphambili uqhutyelwe ukuba asayine umfuziselo Xintai, ngabathengi kungena kwivenkile emnyango umva, wokuhamba ukhuthaza usuku besenza imifuziselo sasemthethweni esinelungelo lokuwisa esiconywayo jikelele.
Noko ke, kukho ityala ukuba imifuziselo ithatha yandise Kucetyiswa, wazise emva kwekhosi. Kwaye injongo yayo, kunye nomnyango kufuphi nje kuphela, mna, ukuze loo ukuyifakela ngokulungelelana ukusebenza evenkileni yonke. Ukuba ziphawulwe ngokubaleka kwimodeli omnye ngasemva, nto inyuka ukusebenza wonder kunye neminye imifanekiso. Ukuba esifakelwa ukusetyenziswa isiphumo induction.
Ukongeza, nokuba sele sungula imifuziselo yandise kucetyiswa ngasemva, ukuze uqiniseke ucango emva kunye nokuvulwa ngaphambili, kufuneka kubekho POP. Ngenye imini evenkileni, uya kufumana iivenkile kakuhle le meko kwaye anike lo mkhwa lokusoloko sikhangele le POP kunye neepowusta. Ngale ndlela, indawo imifuziselo, ngokwemiqathango yokulinganisa popularity and tyhala iqondo kwi pa parlour yeyona nto enkulu.
imodeli ukubeka evenkileni kukho amandla ngaphandle kwe Xintai, ngenxa yokuba kukho amaxesha xa isikhonkwane iye yaba mnandi, nceda khangela zonke kuthetha ngetsheki. Ukusuka elibheke yonke kancinane, xa kungenwa evenkileni, kodwa yintoni na abuyise namhlanje, iivenkile, ezifana gqolo ukuba enoba baza babeka amandla kungacaci kwangoko.